စိတ်၏စွမ်းအား: စဉ်းစားရန် +30 စာပိုဒ်တိုများ | ကိုယ်ပိုင်အကူအညီအရင်းအမြစ်များ
စိတ်၏စစ်မှန်တဲ့ပါဝါကျွန်ုပ်တို့၏ကျန်းမာရေး၊ အနာဂတ်၊ အလားအလာများနှင့်မိမိကိုယ်ကိုလေးစားမှုအပေါ်၎င်း၏သက်ရောက်မှုသည်နက်နဲသောအရာတခုဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်ရာစုနှစ်များစွာဆွေးနွေးငြင်းခုံမှုများစွာဖြစ်ပေါ်စေသည်။
ငါသည်သင်တို့ကိုဤစာပိုဒ်တိုများထားခဲ့ပါ စဉ်းစားတွေးခေါ်မှုကိုလှုံ့ဆော်ပေး။ အချို့သည်အတိတ်ကာလကကမ္ဘာပေါ်တွင်အလေးစားခံရဆုံးသူများ၏လုပ်ရပ်များဖြစ်ပြီးအချို့သည်ယနေ့ခေတ်တွင်အသိအမှတ်ပြုခံရဆုံးသူများနှင့်လှုံ့ဆော်သူများ၏လက်ရာများဖြစ်သည်။ လူတိုင်းသည်ဤစိတ် ၀ င်စားဖွယ်ကောင်းသောခေါင်းစဉ်အပေါ်သူတို့၏အမြင်ကိုဖြည့်ဆည်းပေးသည်။ ထို့အပြင်ကျွန်ုပ်တို့သည်စိတ်စွမ်းအားအကြောင်းပြောဆိုသွားမည်။
စိတ်၏စွမ်းအားသည်အငြင်းပွားစရာဖြစ်သည်။ သင်၏ဘဝ၌သင်ရှိနေသမျှအားလုံးသည်သင်ထင်မြင်ပုံနှင့်ဘဝအပေါ်သင်ရှုမြင်ပုံပေါ်တွင်မူတည်သည်။ သင်ထင်ရင်အရာရာမှားသွားလိမ့်မယ်ထင်တယ်။ အခြားတစ်ဖက်တွင်မူ၊ သင်အခြေအနေများကောင်းမွန်လာမည်ဟုသင်ထင်လျှင်၊ ထိုအရာများအတွက်သင်တိုက်ပွဲဝင်နိုင်သည်။.
သင်၏စိတ်စွမ်းအားကိုသင်သိရှိသောအခါသင်၏ကိုယ်ပိုင်အသက်မွေး ၀ မ်းကျောင်းမှုဆိုင်ရာကျွမ်းကျင်မှုသည်သင်၏ဘ ၀ ၌မည်သည့်နေရာတွင်မျှအကန့်အသတ်မရှိရှိလိမ့်မည်။ လူအများလေးစားရမည့်အချို့သောလူမှုရေးကန့်သတ်ချက်များရှိသည်မှန်သော်လည်းသင်ကိုယ်တိုင်သတ်မှတ်နိုင်သောစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကန့်သတ်ချက်များကိုကျွန်ုပ်တို့ရည်ညွှန်းသည်။ သင့်ဘဝ၏မည်သည့်ကဏ္inတွင်မဆိုတိုးတက်ခြင်းမှတားဆီးသောကန့်သတ်ချက်များစွာကိုသင်မတွေ့ရပါ။
ဤစကားစုတစ်ခုစီကိုသင်လိုအပ်သည့်အခါတိုင်းဤနည်းဖြင့်သင်ရောက်ရှိနိုင်စေရန်ဤစကားစုတစ်ခုစီကိုရေးချရန်မမေ့ပါနှင့်။ သင်ဖတ်သည့်အခါတိုင်း သင်စိတ်ထဲထားရှိသည့်မည်သည့်အရာကိုမဆိုအောင်မြင်ရန်သင့်စိတ်တွင်အနည်းငယ်သောစိတ်လှုပ်ရှားမှုရှိနိုင်သည်.
စိတ်၏စွမ်းအင်သည်ဘဝ၏အနှစ်သာရဖြစ်သည်။ - အရစ္စတိုတယ်
ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအယူအဆများသည်လူ့စိတ်ကိုလွတ်လပ်စွာဖန်တီးနိုင်ခြင်းဖြစ်ပြီးပြင်ပကမ္ဘာကထူးခြားစွာဆုံးဖြတ်ထားပုံရသည်။ - အဲလ်ဘတ်အိုင်းစတိုင်း
အသက်သည်ကိစ္စနှင့် ပတ်သက်၍ စိတ်၏ကိစ္စဖြစ်သည်။ သင့်စိတ်ထဲတွင်ယင်းကိုသင်မထည့်ထားပါက၎င်းသည်အရေးမကြီးပါ။ - မာကု Twain
အနာဂတ်၏အင်ပါယာများသည်စိတ်၏အင်ပါယာများဖြစ်လိမ့်မည်။ - Winston Churchill
တစ်ချိန်ကစိတ်ကူးသစ်တစ်ခုဖြင့်ကျယ်သောလူ့စိတ်သည်၎င်း၏မူလအတိုင်းအတာကိုဘယ်တော့မျှပြန်မရပါ။ - အိုလီဗာ Wendell ကေတီဟုမ်း
ငါမိဘမဲ့ဂေဟာမှာရှိနေတုန်း၊ လမ်းတွေပေါ်မှာစားစရာတစ်ခုခုရှာဖို့ကြိုးစားနေတုန်းကိုယ့်ကိုယ်ကိုကမ္ဘာပေါ်မှာအကောင်းဆုံးသရုပ်ဆောင်လို့ထင်ခဲ့တယ်။ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယုံကြည်မှုကနေလာတဲ့ပျော်ရွှင်မှုကိုခံစားခဲ့ရတယ်။ အဲဒါမရှိရင်ရှုံးနိမ့်ပုံပေါ်တယ်။ - ချာလီ Chaplin
ကျွန်ုပ်တို့ထင်သောအရာသည်ကျွန်ုပ်တို့ဘာဖြစ်သွားသည်ကိုအဆုံးအဖြတ်ပေးသည်။ ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ဘဝကိုပြောင်းလဲလိုလျှင်ကျွန်ုပ်တို့၏စိတ်ကိုတိုးချဲ့ရမည်။ - ဝိန်းဒိုင်ယာ
သင်လုပ်နိုင်သည်ဟုထင်လျှင်သင်လုပ်နိုင်သည်။ သင်မဖြစ်နိုင်ဟုထင်လျှင်သင်မဖြစ်နိုင်ပါ။ - က Denis Waitley
သင်မြင်သောအနာဂတ်သည်သင်ရရှိသောအနာဂတ်ဖြစ်သည်။ - ရောဘတ်ဂျီအယ်လင်, စပီကာ, ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအကြံပေးနှင့်ရောင်းအားအကောင်းဆုံးစာရေးဆရာ။
စိတ်ကို၏မိကျောင်းအမှန်တကယ်တည်ရှိပြီးသောသူများထက်အများကြီးပိုဆိုးဖြစ်ကြသည်။ ကြောက်ရွံ့ခြင်း၊ သံသယများနှင့်မုန်းတီးမှုများသည်များစွာသောလူများကိုသေစေခဲ့သည်။ - ခရစ်စတိုဖာ Paoliniစာရေးဆရာ။
သင်စတင်စဉ်းစားပြီးသင်အမှန်တကယ်လိုချင်သောအရာကိုပြောသည့်အခါသင်၏စိတ်သည်အလိုအလျောက်ပြောင်းလဲသွားသည်ဟုကျွန်ုပ်ထင်မြင်ခဲ့သည်။ - ဂျင်မ် Rohn, ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုဆိုင်ရာကျွမ်းကျင်သူ, စပီကာနှင့်စာရေးဆရာ။
သူမသည်သူ၏စိတ်စွမ်းအားကိုသိပြီးအောင်မြင်မှုအတွက်သူ့ကိုအစီအစဉ်ချခဲ့သည်။ - Carrie Green
စိတ်သည်ပconိသန္ဓေ ယူ၍ အဘယ်သို့ယုံကြည်နိုင်သည်ကိုအောင်မြင်စေနိုင်သည်။ - နပိုလီယံဟေးလ်
ဒီစွမ်းအားကဘာလဲဆိုတာငါမသိဘူး ငါသိသမျှအားလုံးသည်၎င်းတည်ရှိခြင်းဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်သင်လိုချင်သောအရာကိုအတိအကျသိသည့်နေရာတွင်ရှိပြီးသင်ရရှိနိုင်သည့်တိုင်အောင်လက်လျှော့အရှုံးမပေးရန်သင်လုံးဝစိတ်ပိုင်းဖြတ်ထားသည့်အချိန်မှသာရရှိနိုင်သည် ။- အလက်ဇန်းဒါး ဂရေဟမ်
သင်လုပ်နိုင်သည်ဟုထင်လျှင်သင်လုပ်နိုင်သည်။ မင်းထင်လိမ့်မယ်မထင်ဘူး။ ယုံကြည်ချက်ကတော့ power ခလုတ်ကိုဖွင့်ပေးတဲ့ခလုတ်ကနေဖယ်ထုတ်လိုက်တာပါပဲ။ - Denis Waitley
စိတ်သည်အစွမ်းထက်သောစွမ်းအားတစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့ကိုကျွန်ဖြစ်စေနိုင်သည်။ ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့ကိုစိတ်သောကရောက်စေသည့်နက်ရှိုင်းသောသို့နက်ရှိုင်းစွာ ၀ င်ရောက်နိုင်ခြင်း (သို့) စိတ်လှုပ်ရှားမှုအမြင့်သို့ခေါ်ဆောင်သွားနိုင်သည်။ ပါဝါကိုပညာရှိစွာအသုံးပြုရန်သင်ယူပါ ။- David Cuschieri
ငါတို့မသိစိတ်ထဲ၌မည်သည့်အရာကိုစိုက်။ ထပ်တလဲလဲနှင့်စိတ်လှုပ်ရှားမှုကိုသုံးပါစေတစ်နေ့တွင်အဖြစ်မှန်ဖြစ်လာလိမ့်မည်။ - Earl Nightingale
သင်၏စိတ်သည်သင်၏အကြီးမားဆုံးသောစွမ်းအားဖြစ်သည်။ ကောင်းကောင်းသုံးပါ - Aneta Cruz
အကယ်၍ အပြုသဘောဆောင်သောအတွေးများပေါ်ပေါက်လာပါကရလဒ်ကောင်းများရရှိလိမ့်မည်။ ပျက်ကွက်ခြင်းနှင့်ပျက်ကွက်ခြင်း၏အစေ့ကိုစိုက်ပါလိမ့်မယ်။ - Sidney Madwed
သူမသည်သူ၏စိတ်စွမ်းအားကိုသိပြီးအောင်မြင်မှုအတွက်သူ့ကိုအစီအစဉ်ချခဲ့သည်။ -Carrie အစိမ်းရောင်
သင်သည်သင်၏စိတ်ကိုပိုင်ရှင်ဖြစ်လာသောအခါ၊ - Swami Satchidananda
အဖြစ်မှန်သည်သင်၏အတွေးများ (သို့) သင်များသောအားဖြင့်စဉ်းစားသောအရာများထဲမှစီမံကိန်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ - စတီဖင်ရစ်ချတ်
ငါတို့မသိစိတ်ထဲ၌မည်သည့်အရာကိုမြှင့်တင်မည်၊ ထပ်ခါတလဲလဲနှင့်စိတ်လှုပ်ရှားမှုဖြင့်မည်သည့်အစာကိုမဆိုစားပါစေတစ်နေ့တွင်အဖြစ်မှန်ဖြစ်လာလိမ့်မည် ။- Earl Nightingale
သင်စတင်စဉ်းစားပြီးသင်အမှန်တကယ်လိုချင်သောအရာကိုပြောသည့်အခါသင်၏စိတ်သည်အလိုအလျောက်ပြောင်းလဲသွားပြီးသင့်ကိုထိုလမ်းကြောင်းသို့ဆွဲခေါ်သွားသည်ကိုကျွန်ုပ်တွေ့ရှိခဲ့သည်။ တစ်ခါတစ်ရံသင်၏သဘောထားနှင့်အတွေးအခေါ်ကိုဖော်ပြသောဝေါဟာရအနည်းငယ်ကိုလွယ်လွယ်ကူကူရနိုင်သည်။ - Jim Rohn
မင်းရဲ့စိတ်ကအဖိုးတန်တယ်။ သူ၌အဆုံးမဲ့ဖြစ်နိုင်ချေများကိုသော့ဖွင့်ရန်စွမ်းအားရှိသည်။ - Joel Annesley
အကြီးမြတ်ဆုံးစွမ်းအားသည်အတွေးစွမ်းအားမှဆင်းသက်လာသည်။ ဒြပ်စင်သည်ပိုကောင်းလေ၊ အတွေး၏တိတ်ဆိတ်သောစွမ်းအားသည်အဝေးမှပင်လူများကိုလွှမ်းမိုးသည်။ စကြာ ၀ aာသည်စက်ဆုတ်ဘွယ်ဖြစ်တော်မူ၏ စိတ်တွေကပင့်ကူတွေပဲ။ - Swami Vivekananda
သငျသညျပြင်ပဖြစ်ရပ်များမဟုတ်ဘဲ, သင့်စိတ်ကိုကျော်အာဏာရှိသည်။ အဲဒါကိုသဘောပေါက်ပြီးရင်မင်းမှာအားရှိလိမ့်မယ် ။- မားကက်စ်အော်ရီလီယပ်စ်
ဖြစ်တည်မှုပုံစံအသစ်ကိုမကျွမ်းကျင်မီစဉ်းစားတွေးခေါ်မှုပုံစံအသစ်ကိုသင်လေ့လာရမည်။ - Marianne Williamson
ငါစည်းစိမ်ဥစ္စာစိတ်ကိုတစ်ပြည်နယ်ဖြစ်ပြီး, မည်သူမဆိုကြွယ်ဝသောအတွေးများနှင့်အတူတစ် ဦး ကြွယ်ဝသောစိတ်ကိုဆည်းပူးနိုင်သည်ကိုနိဂုံးချုပ်ဖို့ရောက်လေပြီ။ - အင်ဒရူးယန်း
"ကျွန်တော်တို့ထင်တာကငါတို့ဘာဖြစ်သွားတယ်ဆိုတာကိုဆုံးဖြတ်ပေးတယ်။ ဒါကြောင့်ငါတို့ဘဝတွေကိုပြောင်းလဲချင်တယ်ဆိုရင်ငါတို့ရဲ့စိတ်ကိုဆန့်ထုတ်ဖို့လိုတယ်။ " - ဝိန်းဒိုင်ယာ
လူ့စိတ်၏စွမ်းအားကိုကန့်သတ်ချက်မရှိပါ။ ၎င်းသည် ပို၍ အာရုံစိုက်လေလေ၊ point တစ်ခုအပေါ်တွင်ပါဝါပိုမိုအားကောင်းလေလေဖြစ်သည် ။- Swami Vivekananda
သိပ္ပံပညာအားလုံးသည်နေ့စဉ်အတွေးများကိုပြန်လည်ပြုပြင်မွမ်းမံခြင်းသာဖြစ်သည်။ - အဲလ်ဘတ်အိုင်းစတိုင်း
မင်းရဲ့စိတ်ဖိစီးမှုကိုခံနေရတဲ့အခြေအနေကမင်းရဲ့အတွေးတွေမဟုတ်ဘဲမင်းရဲ့အပြောင်းအလဲကိုဒီနေရာမှာပဲပြောင်းလဲလို့ရတယ်။ သင်ဒီမှာနှင့်ယခုတည်ငြိမ်အေးဆေးရန်ရွေးချယ်နိုင်ပါသည်။ ငြိမ်းချမ်းရေးဆိုတာရွေးချယ်စရာတစ်ခုဖြစ်ပြီးအခြားလူတွေရဲ့လုပ်ရပ်နဲ့အတွေးအခေါ်နဲ့ဘာမှမဆိုင်ပါဘူး” - Gerald G. အ Jampolsky, MD
အရာအားလုံးသည်သင်၏စိတ်ထဲတွင်စတင်ပြီးအဆုံးသတ်သည်။ မင်းခွင့်ပြုမယ်ဆိုရင်မင်းကမင်းကိုပေးလိုက်တာကမင်းအပေါ်မှာတန်ခိုးရှိတယ်။ Leon Brown
စိတ်သည်ပုံသဏ္andာန်နှင့်ပြုလုပ်သောအဓိကစွမ်းအားဖြစ်သည်၊ လူသည်စိတ်ဖြစ်သည်၊ သူသည်အမြဲတမ်းအတွေးကိရိယာကိုယူပြီးသူလိုချင်သောအရာကိုပုံသဏ္givingာန်ပေးခြင်းဖြင့်ထောင်ပေါင်းများစွာသောဝမ်းမြောက်မှု၊ ထောင်ပေါင်းများစွာသောဘေးဆိုးများကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။ လျှို့ဝှက်စွာစဉ်းစားပါ၊ ၎င်း၏ပတ်ဝန်းကျင်သည်၎င်း၏ရောင်ပြန်ဟပ်မှုထက်မပိုပါ။ - James Alle ။
သင်၏အတွေးများကိုမင်းယူဆောင်လာသည့်ယနေ့သင်သည်ယနေ့ဖြစ်သည်။ မင်းအတွေးတွေကမင်းကိုယူသွားတဲ့မနက်ဖြန်မှာရောက်မယ် - James Allen
စိတ်သည်၎င်း၏နေရာဖြစ်သည်၊ သူ့ဟာသူတွင်၎င်းသည်ကောင်းကင်ကိုငရဲမှလည်းကောင်း၊ ကောင်းကင်မှငရဲသို့ဖြစ်စေနိုင်သည်။ - John Milton
ကောင်းသောအရာ၊ ဆိုးသောအရာမရှိ၊ - ဝီလျံရှိတ်စပီးယား
မင်းအိပ်မက်တောင်မမက်ဖူးတဲ့စွမ်းအားတွေရှိတယ်။ သင်လုပ်နိုင်သည်ဟုမထင်သည့်အရာများကိုသင်လုပ်နိုင်သည်။ သင်၏ကိုယ်ပိုင်စိတ်ကန့်သတ်ချက်များ မှလွဲ၍ သင်လုပ်နိုင်သည်မှာအကန့်အသတ်ရှိသည်။ - ဒါဝင် P. Kingsley
စိတ်သည်ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်မှန်ဖြစ်ပြီးပိုမိုကောင်းမွန်သောကမ္ဘာကိုကြည့်ရှုရန်ချိန်ညှိသည်။ Amit Ray ။
သင်၏အကြံအစည်များ၏ရလဒ်များကိုသင့်လက်၌ထည့်ထားလိမ့်မည်။ သင်ရရှိသောအရာ၊ လက်ရှိအခြေအနေမည်သို့ပင်ရှိပါစေသင်၏လွှမ်းမိုးလိုသောဆန္ဒများကဲ့သို့သင်၏အတွေးများ၊ ဉာဏ်ပညာ၊ အလိုဆန္ဒများနှင့်အတူကျရှုံးခြင်း၊ - James Allen
သင်သည်သင်၏ဘဝ၏ပိုင်ရှင်၊ သင်သည်သင်၏စိတ်စိတ်၏သခင်ဖြစ်သည်၊ သင်၏တွေးခေါ်ပုံနှင့်ခံစားပုံကိုပြောင်းလဲနိုင်သောစွမ်းအားရှိသည်။ သင်၏ရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်များကိုအောင်မြင်ရန်၊ သင်ဖြစ်ချင်သူဖြစ်ရန်နှင့်သင်၏အိပ်မက်များ၏ဘဝကိုအသက်ရှင်ရန်သင့်တွင်သင့်တွင်တန်ခိုးရှိသည်။ - Zlatoslava Petrak
မင်းရဲ့စိတ်ထဲမှာအမြဲတမ်းရှိနေတာကမင်းဘဝမှာမင်းတွေ့ကြုံခံစားရမှာပါ။ - တိုနီရော်ဘင်
စိတ်သည်ကြွက်သားတစ်ခုနှင့်တူသည်။ သင်ပိုမိုလေ့ကျင့်လေ၊ ပိုမိုအားကောင်းလာလေလေတိုးချဲ့လေလေဖြစ်သည်။ Idowu Koyenikan
သင်၏စိတ်ကိုကိုင်တွယ်ရန်မည်မျှလွယ်ကူသည်ကိုသင်မသိရှိမှီသင်သည်အခြားသူတစ် ဦး ၏ကစားနည်း၏ရုပ်သေးရုပ်ဖြစ်နေသည် ။- Evita Ochel
ကျနော်တို့ထင်သောအရာကိုဖြစ်ကြသည်။ ငါတို့အရာအားလုံးသည်ငါတို့၏အတွေးများမှလာသည်။ ငါတို့ရဲ့အတွေးတွေနဲ့ငါတို့ကမ္ဘာကိုဖန်တီးတယ်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - ကိုယ်ပိုင်အကူအညီအရင်းအမြစ်များ » နည်းလမ်း » စာပိုဒ်တိုများ » စိတ်၏စွမ်းအား - စဉ်းစားရန် +30 စာပိုဒ်တိုများ
အလက်ဇန်းဒါး Muraschkoff ဟုသူကပြောသည်
Alejandro Muraschkoff အားပြန်ပြောပါ
Rosita Lanza ဟုသူကပြောသည်
Rosita Lanza ကိုပြန်ကြားပါ
Gladys carreno ဟုသူကပြောသည်
Gladys Carreno အားပြန်ပြောပါ
မီးခိုးရောင် AnatoOmi ဟုသူကပြောသည်
Grey AnatoOmi ကိုပြန်သွားပါ
ဒို Mateo Bartolo ဟုသူကပြောသည်
Eduardo Mateo Bartolo အားပြန်ပြောပါ
သောမတ်စ်အက်ဒီဆင်နှင့်ပတ်သက်။ 10 သိချင်စိတ်